राजनीति होइन, असल नेतृत्व र व्यक्तित्वको उत्पादन गर्छाै | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / राजनीति होइन, असल नेतृत्व र व्यक्तित्वको उत्पादन गर्छाै
राजनीति होइन, असल नेतृत्व र व्यक्तित्वको उत्पादन गर्छाै
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता January 3, 2018	0 209 Views
त्रिभुवननगर जे सीसका वर्ष २०१८ का नवनिर्वाचित अध्यक्ष लालमणि भण्डारीसग नया युगबो ध राष्ट्रिय दै निकका गिरिराज ने पालीले गरे को कुराकानीको सारसंक्षे प । –सम्पादक
नयाँ जिम्मे वारीका शुरुवाती दिनहरु कस् ता छन् ?
भर्खरै निर्वाचित भएको छु । निर्वाचनको माहो ल अझै सकिएको छै न । धन्यवाद दिने र शुभकामना आदानप्रदान गनेर् काम जारी नै छ । ठ्याक्कै के भने नया“ जिम्मे वारी बो के पनि पद हस् तान्तरण अझै भएको छै न । आउदो २८ गते पद हस् तान्तरण कार्यक्रम आयो जना गरिने भएको छ । २९ गते दे खि अध्यक्षको हस् ताक्षरसहितको पदवहाली गर्ने छु । त्यसपछि जे सीजको पूर्ण जिम्मे वारीसहितको पदीय कर्म थालनी गर्ने छु ।
के कामबाट आफ्नो जिम्मे वारीको पहिलो दिनको थालनी गर्नुहुन्छ ?
ठ्याक्कै यही काम पहिलो दिन यो काम गर्छु भने र भन्दै न  । अब एक वर्षका लागि मै ले संस् थाको जिम्मे वारी बो के को छु । साथीहरुले त्यो जिम्मे वारी पूरा गर्ने अवसर दिनुभयो  । गर्नुपर्ने कामको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन यो जनाहरु तयार गरे को छु । के ही गृहकार्य ह“ुदै छन् । मै ले चाहि“ अबको एक वर्षमा पूर्वजहरुस“ग सरसल्लाह, विगतको समीक्षा गर्दै सुधार्नुपर्ने काममा सुधार र नया“ गर्नुपर्ने काम थालनी गर्दै जाने छु । दाङको त्रिभुवननगर जे सीजलाई पश्चिम ने पालमै पहिलो संस् थाको रुपमा विकास गर्ने प्रयत्न गर्ने छु । साथै युवा साथीहरुको सीप र क्षमताको कदर गर्दै संस् थाको उन्नतिका लागि काम गर्ने छु । पहिले काम यो नै हो मे रो र नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको भन्ने अझै तय गरे का छै नौ ं गृहकार्य गरिरहे का छौ ं ।
अबको एक वर्षका लागि कस्ता यो जना बनाउदै हुनुहुन्छ ?
हामीले स् थापनाकालदे खि नै वार्षिक कार्य यो जना निर्माण गर्दै नियमित कार्यहरु गर्दै आइरहे का छौ ं । अब हामीले पनि ती कार्यहरुलाई निरन्तरता दिने नै छौ ं । यी बाहे क हामीले यस वर्ष नया के ही कार्यक्रमहरु गर्ने सो च बनाएका छौ ं र गर्ने पनि छौ ं । जसमा ‘जे सीज गाउ“’ निर्माण गर्ने तय गर्दै छांै  । जुन गाउ“ निर्माण र प्रबद्र्धनका लागि हामीले तीब्रताका साथ काम गर्ने छौ ं । जे सीज ‘भिले ज ’ अर्थात जे सीज गाउ“ निर्माण गरी असल व्यक्तित्व र ने तृत्व उत्पादन गरी सभ्य र सद्भावमै त्री समाज निर्माणमा टे वा पु¥याउने छौ ं । युवा सशक्तिकरण, युवा श्रम शक्ति र सीपको सदुपयो ग गरी असल समाज निर्माणमा विशे ष भूमिका निर्वाह गर्ने यो जना निर्माणका साथ अगाडि बढ्ने छौ ं । हाम्रो समाज दिनै पिच्छे दुव्र्यसनको दलदलमा फस् दै गइरहे को छ । त्यसको प्रत्यक्ष शिकार युवाहरु नै बने का छन् । जसका कारण सामाजिक सद्भाव खल्बलिदै अशान्ति फै लिदै गइरहे को छ । अबको हाम्रो उद्दे श्य भने को युवा शक्तिको जा“गर, सीप र क्षमतालाई असल समाज निर्माणमा खर्च गर्ने तर्फ उप्रे रित गर्नु नै हो  । युवा सशक्तिकरण र असल समाज निर्माणका लागि युवा शक्तिलाई उत्साहित गर्नु नै हो  ।
अकोर् मे रो एउटा यो जना– अब मे रो पालामा अर्थात यही २०१८ मै त्रिभुवननगर जे सीजले साविकको राप्ती अञ्चलका पर्यटकीय क्षे त्रको अध्ययन र अवलो कन गरी ती क्षे त्रहरुको संरक्षण र विकासका लागि विशे ष यो जना निर्माण गरी पर्यटकीय सूचना के न्द्र स् थापना गर्ने तय गरे को छु । आर्थिक विकासको एउटा सूचक पर्यटन विकास पनि रहे काले दाङको आर्थिक समृद्धिका लागि यो अपरिहार्य छ । दाङका पर्यटकीय क्षे त्रहरुको प्रवद्र्धनका विशे ष यो जना निर्माण गरी समृद्धिको ढो का खुलाउने प्रयास गर्ने छांै । ने पाल जे सीजले ने पालभर चारवटा क्षे त्र छुट्याएर क्षे त्रगत संरचना विभाजन गरे को छ । जसमा क, ख, ग र घ गरी विभाजन गरिएको छ । दाङ अर्थात हामी ‘घ’ क्षे त्रअन्तर्गत पर्दछांै  । जसलाई हामीले के न्द्रका रुपमा पनि विकासका गर्ने मनसाय बो के का छौ ं । आउने भदौ सम्ममा क्षे त्रगत सम्मे लन गर्ने तय गरे का छौ ं । पूर्वमा नारायणीदे खि पश्चिममा महे न्द्रनगरसम्म दाङलाई के न्द्रमा राखी क्षे त्रगत सम्मे लन गर्ने छांै  ।
यी काम एक वर्षमा हुन्छन् ?
ढुक्क हुनुस्, हामीले दुई चारवटा मात्रै कुरा नया“ राखे को छांै  । अन्य बा“की नियमित गर्दै आइरहे का वार्षिक कार्यक्रम रहे को मै ले माथि नै उल्ले ख गरिसके को छु । हामी कुरामा भन्दा काममा बढी विश्वास गर्छाै ं । जो युवा सशक्त टो ली नै छ । जे सीजमा आस् थावान र आबद्ध जे सीहरुले काम नै हाम्रो काम भन्ने भाव राख्नुहुन्छ र राख्छांै पनि । हाम्रो संस् था सञ्चालनको एक वर्षकै म्याद हो  । अर्काे वर्षमा अरुलाई पद सुम्पनुपर्छ । २०१४ मा जे सीजको खे लकूद संयो जक ह“ुदै १५ मा उपाध्यक्ष, १६ मा महासचिव, १७ मा को षाध्यक्ष र १८ का लागि अध्यक्षको जिम्मे वारी बो के को छु । यो जिम्मे वारी हिजो को के ही सफल कर्मको पनि हो  । हिजो विभिन्न तहतप्कामा रही जे सीजको विकास र संरक्षणसहित सामाजिक से वाभावमा लागे ं । अझै पनि लाग्दै छु । अब ल्याइएका यो जनाहरु पूरा हुन्छन् । हिजो पनि भएका थिए ।
समाज सुधारदे खि आर्थिक समृद्धिसम्मका कुरा गर्नुभयो  । खासमा जे सीजको मुख्य उद्दे श्य के हो  ?
जेसीज सिक्ने÷सिकाउने थलो हो । हाम्रो मुख्य उद्दे श्य नै असल ने तृत्व र व्यक्तित्व उत्पादन गर्नु हो  । मानवीय से वा नै धर्म हो भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्छौ ं । नाफा कमाउने वा राजनीति गर्ने उद्दे श्यले हामी संस् थामा संलग्न भएका है नांै  । जे सीज एक पाठाशाला हो  । यहा“ को रा किताबी ज्ञानको पढाइ नभई व्यावहारिक से वाभावको पढाइ हुन्छ । जो हामीले गर्दै आइरहे का पनि छौ ं । हामीले संस् थामा राजनीतिको ‘र’ उच्चारण गर्दै नौ ं । त्यो हु“दै न पनि । हाम्रो मुख्य उद्दे श्य नै हरे क व्यक्तिलाई ने तृत्वदायी जिम्मे वारीको बो ध गराउने र व्यक्तित्वको विकास गराउने नै हो  । जो व्यक्ति र ने तृत्व असल समाज निर्माणमा खर्च गनेर् े अर्काे लक्ष पनि हो  । तर हामीले समूहको शक्तिलाई समाज रुपान्तरणमा लै जाने गरे का छौ ं । हाम्रो समूहलाई समृद्धिमा पनि जो ड्ने गरे का छांै  । व्यक्ति–व्यक्तिले लगानी गर्दै सामाजिक से वाका लागि काम गर्छाै ं । सहयो ग संकलन गर्दै विपत, विपन्नका घरघरमा जान्छौ ं ।
जे सीजमा राजनीति छै न भन्नुभयो  । निर्वाचनका बे लामा पक्ष–विपक्ष दे खिन्छ, दल समर्थकहरु पनि भे टिनुहुन्छ नि है न ?
लो कतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन हुनु, पक्ष विपक्ष दे खिनु अस् वाभाविक कुरो है न । यसलाई स् वाभाविकै मान्न सकिन्छ । के ही वर्ष अघिसम्ममा हामीले सर्वसम्मतबाट अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी निर्वाचित गथ्यौर् ं । तर के ही वर्षदे खि जे सीजमा निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित हुनुपर्ने अवस् था दे खिएको छ । जुन निकै राम्रो काम पनि हो  । हिजो का दिनमा जे सीजले सञ्चालनका लागि ने तृत्वको अभाव खे पे को थियो  । आज जे सीजले ने तृत्वका लागि थुप्रै ने तृत्वकर्ताहरु उत्पादन गरे को छ । जुन गौ रवको विषय पनि हो  । हामीले हिजो सम्म ने तृत्वका लागि मान्छे खो ज्नुपथ्योर्  । आज सबै ले म ने तृत्व गर्छु भने र आउनुहुन्छ । जसका लागि निर्वाचन गनैर् पनेर् बाध्यता दे खिन्छ । तर दलगत विभाजन भएर निर्वाचन भएको हुदै न । म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु । विचार र आस् था राख्न पाउनु हरे क नागरिकको मौ लिक अधिकार नै हो  । तर हामीले त्यो अधिकारलाई जे सीजमा भिœयाएको छै नौ ं । त्यो बाहिरी दे खिएको हो ला । तर भित्र छै न । जे सीज राजनीतिदे खि अछुतो नै छ । त्यो भ्रममा को ही पनि पर्नुह“ुदै न । हामी स् वच्छरुपमा, दलीय हस् तक्षे पबिना आबद्ध साथीहरुबीच भातृत्वको भावना विकास गर्दै स् वच्छ र मै त्रीपूर्ण निर्वाचन प्रणालीमार्फत संस् था सञ्चालन गर्दै आइरहे का छांै  ।
जे सीजमा धनवाद र नातावाद निकै छ रे , पै सा र आफन्त हुने ले मात्रै चुनाव जित्छन भन्छन नि  ?
मै ले अघि भनिसकें संस् था दान अनुदानका भरमा चल्दै आइरहे को छ । संस् थामा के छ र के धान्ने हो  ? व्यक्ति खो ज्दै संस् था चलाउ“दै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संस् थाको अवस् था यस् तो छ, सबै ले बुझे को विषय हो  । स् वच्छ प्रतिस् पर्धा हुन्छ, कसै ले पै सा ख्वाएर र भो जभते र गरे र निर्वाचन जिते का छै नांै  । त्यसमा मतदाताहरु पनि प्रष्ट छन । म फे रि दो हो ¥याएर भन्छु राजनीति र पै साको चलखे ल गरे को अहिले सम्मको इतिहास छै न । अर्काे कुरा हामीले सबै जाति, धर्म र लिंगको सम्मान गर्छांै  । जातपातको कुरा जे सीज बाहिरै छ । हामीले संस् थामा राजनीतिकरण, जातीयता र धनी–गरिवको पक्षपात कहिले गर्दै नांै  । असल क्षमता र व्यक्तिको मात्रै खो जी गर्छाै ं ।
अन्त्यमा थप के ही भन्नु छ कि ?
अन्त्यमा, सबै ले सही कर्म गरे र जानुपर्छ । आज मै ले चुनाव जिते ं एक्लै मै ले नै के –के गरें भने र सो च्ने छै न ।
सबै ले सबै को हित सो च्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचित भए“ र मस“गका सबै साथीहरुस“ग हाते मालो गर्दै संस् थाको हितमा सहकार्य गर्ने छु । सहकार्य र सद्भावको विकास गर्दै संस् थालाई अझै विकास उन्मुख बनाउने छु भन्दै तपाइ“ र तपाइ“को पत्रिका परिवारलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु ।
२०७४ पुस १९ गते बुधवार प्रकाशीत
Previous: सांसदलाई टोपी पहिराएर विकासको माग
Next: घोराहीमा विशेषज्ञ सेवासहित बुद्ध हस्पिटल सञ्चालन
सहज सेवा र व्यावसायिक सुरक्षाको खोजीमा छौं